ट्विंकलले खोलिन् राज – शाहरुख, सलमान र आमिरको भन्दा अक्षयको लामो ! - Rastrakokhabar
ट्विंकलले खोलिन् राज – शाहरुख, सलमान र आमिरको भन्दा अक्षयको लामो !
३१ जेष्ठ २०७७, शनिबार ०७:५९
एजेन्सी : बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारकी श्रीमति ट्विंकल खन्नाले केहि समय पहिले अनौठो खुलासा गरेकी थिइन् ।
भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार करण जोहरको शोमा करणले ट्विंकललाई उनको श्रीमान् अक्षय कुमारसँग के छ ? जुन बलिउड कलाकार शाहरुख , सलमान र आमिर खानसँग छैन भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
ट्विंकलले उत्तर अंग्रेजीमा दिदै भनिन् – अ फ्यू एक्स्ट्रा इन्चेस (A few extra inches) । उत्तरसँगै करण जोहरको अनुहार रातो बन्यो । अक्षय कुमार पनि लाजले यता-उता हेर्न थाले। ट्विंकल यतिमै रोकिनन् करणलाई अक्षय कुमार तर्फ प्रश्न गर्न नदिइ आफ्नो कुरा स्पस्ट पारिन् । उनले अक्षयको कुनै विशेष अंगको कुरा नगरेर अक्षयको खुट्टाको भनेको बताइन् ।
कार्यक्रमको क्रममा ट्विंकलले अक्षयले सेसिबल चलचित्रमा अभिनय नगरे सम्म दोस्रो सन्तान नदिने चेतावनी दिइन् । ट्विंकलले यस खालको प्रतिक्रिया दिनु नौलो भने होइन उनले यस भन्दा पहिले पनि यस्तो भनाइ राख्दै आएकी छन‍् ।
Previous Post	सरकारी जमिन स्थानीयले गरे अतिक्रमण
Next Post	संविधान संशोधन विधेयक आज पारित हुँदै
निर्देशक कार्कीको निधन
२३ बैशाख २०७८, बिहीबार १५:१८
१७ बैशाख २०७८, शुक्रबार १६:१०